အဆိုပါ SRT ပွင့်လင်းပုံစံ - ဖိုင် FORMAT - 2019
ကွန်ယက် Router က firmware ကို၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုသင့်လျော်စက်ကိုမပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ အပ်ဒိတ်ကဘာဂ်, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များသာတတ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်သူ, ဆော့ဖ်ဝဲ၏လက်ရှိဗားရှင်းကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။ အောက်တွင်ကျနော်တို့ router ကို D-Link DIR-300 မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရရန်အ firmware ကို update လုပ်ဖို့သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
EEPROM နည်းလမ်းများ D-Link DIR-300
အလိုအလြောကျသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင် - ဒါဟာနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက် Router ကတစ်ဦးအမှုအပေါ် updated ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအသိထဲမှာ, နည်းလမ်းများကိုအတိအကျတူညီနေကြသည် - သင်နှစ်ဦးစလုံးကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အများအပြားအခြေအနေများလိုက်နာရမည်:
router သည် PC ကိုတစ်ဦး patch ကို-ကြိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းချိတ်ဆက်ထားရပါမည်;
မမှန်ကန်ကြောင်း firmware ကိုအဆုံးစွန်သောကြောင့်ကျရှုံးစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကွန်ပျူတာနှင့် Router ကသူ့ဟာသူအဖြစ်ပယ်ရှောင်ရှားဖို့အဆင့်မြှင့်စဉ်အတွင်း။
Method ကို 1: အလိုအလျောက် mode ကို
Software များ Update ကိုအလိုအလျှောက်အချိန်နှင့်လုပ်အားကယ်တင်နှင့်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အခြေအနေများအပြင်တစ်ခုသာတည်ငြိမ်တဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်ဖျော်ဖြေ:
router ရဲ့ Web ကို interface ကိုဖွင့်ပါနှင့် tab ကိုဖွင့်လှစ် "စနစ်"selection ရသော "Software များ Update ကို".
ခေါ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာပါ "အဝေးမှ update ကို"။ အထဲတွင်သင်တစ်ဦး checkbox ကိုအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါတယ် "အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများအဘို့အ Check"သို့မဟုတ်ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "updates တွေကို Check".
firmware ကို updates များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်, သင်ကလိပ်စာဘား updates များကို server ကိုအောက်အသိပေးစာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခလုတ်ကိုတက်ကြွဖြစ်လာ "ဆက်တင်များ Apply" - အဆင့်မြှင့်စတင်ရန်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
စစ်ဆင်ရေး၏တစ်ဦးကထပ်မံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. 1 မှ 10 မိနစ်အချို့အချိန်ကြာပါတယ်။ အဆိုပါ firmware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေစဉ်အတွင်းကွန်ယက်ကိုပြတ်တောက်ခြင်း, router ကိုဆွဲထားသို့မဟုတ် reboot အနေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အခြေအနေများမှာစနစ်သစ်ဆော့ဖျဝဲ၏ installation, ဒီသာမန်ဖြစ်တယ်, ဒါစိတ်ပူစရာပဲအဆုံးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းကြဘူး။
Method ကို 2: ဒေသခံနည်းလမ်း
တချို့ကအသုံးပြုသူများကို manual firmware ကို update ကို mode ကိုအလိုအလျောက်လမ်းထက်ပိုမိုထိရောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှာပါ။ နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအတော်လေးယုံကြည်စိတ်ချရသောသော်လည်း, ကို manual option ကိုကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုတက်ကြွအင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ upgrade လုပ်နိုင်စွမ်းသည်။ Router ကိုများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကို install လုပ်ဖို့လွတ်လပ်သော option ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအောက်ပါ sequence ကိုရှိပါတယ်:
Router ကို၏ဟာ့ဒ်ဝဲတည်းဖြတ်မူဆုံးဖြတ်ရန် - အရေအတွက်က device ကို၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီးသောတံဆိပ်ပေါ်တွင်ညွှန်ပြနေသည်။
FTP ကို-server ကိုထုတ်လုပ်သူ downloads, ဤ link ကိုနှိပ်ပြီးသင့်ရဲ့ device ကိုမှဖိုင်များကို်ဖိုင်တွဲကိုရှာပါ။ အဆင်ပြေ, သင်နှိပ်နိုင်သည် ပြီးရင် Ctrl + F ကို, ရှာဖွေရေး box ထဲမှာရိုက်ထည့်ပါdir-300.
သတိပေးခြင်း! DIR-300 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း, C နဲ့ NRU နှင့် DIR-300 - ကွဲပြားခြားနားသော device များဖြစ်ကြသည် EEPROM နှင့် မ လဲလှယ်!
ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် subdirectory ဖို့လမ်းညွှန် « Firmware ».
ထို့နောက်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုသင့်လျော်သောတည်နေရာမှာ BIN ပုံစံကနေလိုအပ်တဲ့ firmware ကို download လုပ်ပါ။
ပွင့်လင်း firmware update အပိုင်း (ယခင်နည်းလမ်း၏ခြေလှမ်း 1) နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုသတိပြုပါ "ဒေသတွင်းက update ကို".
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ - ပထမခြေလှမ်းဟာ firmware ကိုဖိုင်ကိုရွေးရန်ဖြစ်ပါသည် "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" နှင့်တဆင့် "Explorer ကို" ယခင်ကဒေါင်းလုပ်လုပ် BIN-file ကိုအတူ directory ကိုမှ navigate ။
ခလုတ်ကိုသုံးပါ "Update ကို" ဆော့ဖ်ဝဲ upgrade ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်။
အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, နောက်ထပ်အသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်ပါသည်။ Router ကိုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်က Wi-Fi ကိုရပ်လိုက်လျှင်ဤ option များအတွက်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဝိသေသအင်္ဂါရပ်တွေဒါကြောင့်အုတ်အုတ်သဲသဲမပါဘူး။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်း firmware ကို D-Link အကြောင်းကို DIR-300 ကျော်ဖြစ်ပါသည် - သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်, ဒီအဘယ်သူမျှမကိုင်တွယ်အတွက်ရှုပ်ထွေးဘာမျှမ။ တစ်ခုတည်းသောအခက်အခဲတိကျသောကိရိယာမှန်ကန်သော firmware ကိုတည်းဖြတ်မူရွေးချယ်ရာတွင်လုပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မလျော်ကန်သော installation ကိုဗားရှင်းတစ်ဦးသည် router ပျက်ကွက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုသို့ပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: SRT - Everything You Need to Know. Up to Speed (နိုဝင်ဘာလ 2019).